INqabayokulinda Yolimi LwaseGreenland Idunyiswa Kuyithelevishini
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Estonia Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine Isi-Uzbek IsiBhunu IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFante IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreenland IsiGreki IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTotonac IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTzeltal IsiTzotzil IsiValencia IsiXhosa IsiZapotec (SesiLachiguiri) IsiZulu
Ngo-January 2013, besekuphele iminyaka engu-40 kunyatheliswa INqabayokulinda yolimi lwaseGreenland. Lolu limi lwama-Inuit lukhulunywa nje abantu abangu-57 000.
EGreenland kunoFakazi BakaJehova abangu-150 kuphela, kodwa le Nqabayokulinda ifundwa abantu abangu-2 300. Lokhu kusho ukuthi iningi labantu abafunda i-Napasuliaq Alapernaarsuiffik, okuyigama lalo magazini ngolimi lwaseGreenland, ababona oFakazi.
Engxoxweni eyayikuthelevishini, umqondisi wehhovisi labahumushi eNuuk wathi: “Abantu abaningi baseGreenland balithanda kakhulu iBhayibheli, yingakho befunda i-Napasuliaq Alapernaarsuiffik.”
Ngesikhathi lowo oqhuba ingxoxo ebuza omunye wabahumushi bomdabu bolimi lwaseGreenland ukuthi yini ayithandayo ngalo magazini, lo mhumushi wathi: “Mina ngokwami ngiye ngazuza ngokufunda lo magazini. Ngokwesibonelo, uye wangibonisa indlela yokuphila ukuphila okuhle nokunempilo. Ngangingumlutha kagwayi, ngisho noma ngangazi ukuthi kuyingozi kangakanani. Kodwa iBhayibheli lisitshela ukuthi uma sifuna ukuphila ukuphila okunempilo, kudingeka sigcine imizimba yethu ihlanzekile.”
Kule ngxoxo kwavezwa nokuthi oFakazi BakaJehova bebelokhu bekhona eGreenland kusukela maphakathi nawo-1950 futhi benyathelisa izincwadi nezincwajana ngolimi lwakuleli.  Abahumushi bayizisebenzi zokuzithandela ezivela eDenmark naseGreenland, futhi umgomo wabo ubulokhu uwukwenza lokho abakuhumusha ngolimi lwaseGreenland kuzwakale kungokwemvelo.
UFakazi osemnkantsh’ ubomvu waseGreenland wathi: “Sengineminyaka engu-25 ngishumayeza abantu baseGreenland futhi ngibone ubuhle bokuba nezincwadi zolimi lwabo. Kwezinye izindawo ezithé ukuqhela, esifika kuzo kuphela ngesikebhe ezinyangeni ezimbalwa onyakeni, kunabantu abakuthandayo ukufunda omagazini bethu, ngakho uma ithuba lokubavakashela livela, njalo sibabhalela izincwadi sibathumelele nezincwadi ezinyathelisiwe.”
Kusukela ngo-January 2013, kuye kwanyatheliswa INqabayokulinda efundwayo neyomphakathi yolimi lwaseGreenland. Lab’ omagazini ungabafunda futhi ubadawunilode engxenyeni ethi “Izincwadi” engosini ethi jw.org ngokukhetha ulimi lwaseGreenland bese uchofoza elithi “Funa.”